Twenty-one को रूपमा समान रूपमा चिनिन्छ। नियमहरू सरल छन्, खेल रोमाञ्चक छ, र उच्च रणनीतिको लागि अवसर छ। वास्तवमा, विशेषज्ञ खेलाडीको लागि जो गणित रूपमा एकदम राम्रो खेल खेल्दछ र कार्डहरू गणना गर्न सक्षम हुन्छ, फरक फरक हुन्छ कि खेलाडीलाई जित्नका लागि फाइदा हुन्छ।
तर आकस्मिक सहभागीका लागि जसले एक उचित राम्रो खेल खेल्छ, कैसीनो बाधाहरु कम छन्, बनाउने ब्लेक खेलाडीको लागि सबैभन्दा आकर्षक कैसीनो गेमहरू मध्ये एक। जबकि ब्ल्याक ज्याक को लोकप्रियता प्रथम विश्वयुद्ध देखि लोकप्रिय छ, यसको जड फ्रान्स मा 1760s मा जान्छ, जहां यसलाई Vingt-et-Un भनिन्छ (21 को लागि फ्रांसीसी)। आज, ब्लैकज्याक एक कार्ड गेम हो जुन हरेकमा फेला पार्न सकिन्छ अमेरिकी जुआ कैसीनो। एक लोकप्रिय गृह खेलको रूपमा, यो थोडा फरक नियमहरूसँग खेल्दछ। क्यासिनो संस्करणमा, घर व्यापारी हो (एक "स्थायी बैंक")। क्यासिनो खेलमा, व्यापारीले उभिरहेको छ, र खेलाडीहरू बैट हुन्छन्। डीलर खेल को सबै पहलुहरु लाई चलान को लागी चार्जिंग देखि र सबै शर्तहरुलाई संभालने को लागि कार्डहरु लाई निपटने को आरोप मा छ। गृह खेलमा, सबै खेलाडीहरूले डीलर (एक "परिवर्तनकारी बैंक") गर्ने मौका छ।
मानक 52 कार्ड प्याक प्रयोग गरिन्छ, तर धेरै क्यासिनोहरूमा धेरै डेक कार्डहरू सँगै फेरिएको छ। छ-डेक खेल (312 कार्डहरू) सबैभन्दा लोकप्रिय हो। यसबाहेक, डीलरले खाली प्लास्टिक कार्ड प्रयोग गर्दछ, जुन कहिल्यै निलम्बित छैन, तर प्याकको तल्लोमा तिर राखिएको छ जब कार्डहरू पुन: भण्डारण गर्नको लागि संकेत हुनेछ। जब चार वा बढी डेकहरू प्रयोग गरिन्छ, तिनीहरू जूताबाट निस्किएका हुन्छन् (बक्स जसले डीलरलाई एक समयमा एक पटक कार्डहरू हटाउन अनुमति दिन्छ, तल अनुहार, वास्तवमा एक वा बढी प्याकहरू बिना) राख्दछ।
प्रत्येक सहभागीले 21 नजिकको गणनाको रूपमा गणना प्राप्त गरेर डीलरलाई हराउन प्रयास गर्दछ, बिना 21 माथि जानुहोस्।
कार्ड वैल्यू / स्कोरिंग
यो एक्सेन्जर प्लेयरमा छ यदि एसे 1 वा 11 को लायक छ भने। अनुहार कार्डहरू 10 हुन् र कुनै अन्य कार्ड यसको पाइप मान हो।
सम्झौता सुरु गर्नु अघि, प्रत्येक खेलाडीले उनको नाममा निर्दिष्ट क्षेत्रमा एक शर्त, चिप्समा राख्छ। शर्तमा न्यूनतम र अधिकतम सीमाहरू स्थापित भएका छन्, र सामान्य सीमा $2देखि $ 500 सम्म हो।
राफ्ट र बिच
डीलर राम्रा रूपमा प्याकका अंशहरू बन्द गर्छ जबसम्म सबै कार्डहरू मिश्रित र संयुक्त। उनले कटौती गर्नको लागि एक खेलाडीलाई नामकरण गर्दछ, र प्लास्टिक सम्मिलित कार्ड राखिएको छ ताकि अन्तिम 60 लाई 75 कार्डहरूमा वा यति प्रयोग गर्दैन। (सबै कार्डहरूको तल निस्कन नपाउँदा व्यावसायिक कार्ड काउन्टरहरू प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न अझ गाह्रो हुन्छ।)
जब सबै खेलाडीले आफ्नो शर्त राखेका छन्, व्यापारीलाई घडीको दिशामा प्रत्येक प्लेयरलाई एक कार्डको सामना गर्दछ, र त्यसपछि एक कार्ड आफैलाई अनुहार दिन्छ। कार्डहरूको अर्को गोल त्यसपछि प्रत्येक खेलाडीलाई अनुहारको सामना गरिन्छ, तर व्यापारीले दोस्रो सेकेन्डलाई सामना गर्छ। यसैले, डीलर को छोडेर प्रत्येक खेलाडि दुई कार्ड प्राप्त गर्दछ, र डीलरले एक कार्ड अनुहार पाउँछ र एक कार्ड अनुहार दिन्छ। (केहि खेलहरुमा, केवल एक डेक संग खेलाडी, खेलाडीहरु को कार्डहरु को सामना गर्न को लागी छ र उनि उनलाई पकड जान्छ। आज, तथापि, ब्लैकजैक गेम सबै फील्ड्स को विशेषता हो कि खिलाडियों को कार्डहरु लाई यस शर्त मा छ कि कुनै खेलाडी नहीं कुनै कार्डहरू।)
यदि एक खेलाडीको पहिलो दुई कार्डहरू एस र "दस-कार्ड" (एक तस्वीर कार्ड वा 10) हो, त्यसलाई 21 को दुई कार्डमा गणना दिइयो, यो एक प्राकृतिक वा "ब्ल्याक ज्याक" हो। यदि कुनै खेलाडीले प्राकृतिक र व्यापारीले गर्दैन, व्यापारीलाई तुरुन्तै भुक्तानी गर्दछ कि खेलाडी एक र अर्ध पटक उनको शर्तको रकम। यदि डीलरलाई स्वाभाविक छ भने, उहाँले तुरुन्तै सबै खेलाडीहरूको शर्तहरू एकत्र गर्नुहुन्छ जुन प्राकृतिकहरू छैन, (तर कुनै थप रकम)। यदि डीलर र अर्को खेलाडी दुवै को नैतिकता छन् भने, खेलाडीको शर्त एक स्ट्यान्ड अफ (एक टाई) हो, र खेलाडीले आफ्नो चिप्स फिर्ता लिन्छ।
यदि डीलरको फेस-अप कार्ड दस कार्ड वा अक्का हो भने, उसले दुईवटा कार्डलाई प्राकृतिक बनाउँछ भने हेर्नको लागि उसको अनुहार-डाउन कार्ड हेर्छ। यदि अनुहार-कार्ड कार्ड दस कार्ड वा अक्किने छैन भने, त्यो डेलरको पछाडि खेल नगरेसम्म अनुहार-डाउन कार्डमा हेर्ने छैन।
बायाँको खेलाडी पहिला जान्छ र निर्णय गर्न अनिवार्य छ कि "खडा" (अर्को कार्डको लागि सोध्नु हुँदैन) वा "हिट" (अर्को कार्डको लागि 21 को नजिक पुग्न प्रयास गर्नुहोस् वा सट्टामा 21 लाई पनि हिट गर्नुहोस्)। यसैले, एक खेलाडिले दुईवटा कार्डहरूमा खडा हुन सक्दछ जुन मूलतः उनलाई निलम्बन गर्न सक्छ, वा उसले थप कार्डहरूको लागि व्यापारीलाई, एक समयमा एक चोटि सोध्न सक्छ, जबसम्म उनीहरूले सबै कुलमा खडा गर्ने निर्णय गरे (यदि यो 21 वा अन्तर्गत छ), वा जान्छ " बस्ट "(यदि यो 21 भन्दा माथि छ)। पछिल्लो अवस्थामा, खेलाडी हराएको छ र डीलरले दाबी गरेको शर्तलाई एकत्र गर्दछ। त्यसपछि व्यापारीले बायाँतिर अर्को खेलाडीलाई पराजित गर्दछ र उसलाई पनि काम गर्दछ।
दस-कार्ड भन्दा अन्य कार्डको साथ एक इक्काको संयोजन "मुलायम हात" को रूपमा चिनिन्छ किनभने खेलाडीले 1 वा 11 को रूपमा अङ्क गणना गर्न सक्छ, वा कार्डहरू ड्र्याग गर्नुहोस् वा होइन। उदाहरणको लागि "नरम 17" (एस र एक 6) को साथ, कुल7वा 17 हो। जबकि 17 को गिनती एक राम्रो हात हो, खेलाडीले उच्च कुल को लागी आकर्षित गर्न चाहन्छ। यदि ड्रमले 11 को रूपमा इक गणना गरेर बस्ट हात सिर्जना गर्दछ भने, खेलाडीले 1 को रूपमा एक्से गणना गर्दछ र खडा वा "हिट" खेलिरहेको छ (थप कार्डका लागि व्यापारीलाई, एक समयमा एक पटक)।
जब डीलरले हरेक खेलाडीलाई सेवा गरेको छ, तिनको अनुहारमा कार्ड परिवर्तन भएको छ। यदि कुल 17 वा अधिक छ भने, त्यो खडा हुनुपर्दछ। यदि कुल 16 वा कम छ भने, उसले कार्ड लिनुपर्छ। उसले 17 वा अधिक नभएसम्म कार्ड लिन जारी राख्नुपर्दछ, जसमा डीलर खडा हुनुपर्दछ। यदि डीलर एक इक्का छ र यसलाई 11 को रूपमा गणना गर्दा उसको कुल 17 वा अधिक (तर 21 भन्दा माथि) लाई ल्याउनेछ, उसले एक्सेन्सलाई 11 को रूपमा गणना गर्नुपर्छ र खडा हुनेछ। डीलरको निर्णय, त्यसपछि, सबै प्लेसूचीहरूमा स्वचालित छन्, जबकि खेलाडीलाई सधैँ एक वा बढी कार्डहरू लिने विकल्प छ।
जब एक खेलाडीको पछाडि आउँछ, उसले "हिट" भन्न सक्दछ वा एक औंलाको साथमा ट्याग खरिद गरेर आफैलाई तिरेर ट्याग खरिद गरेर कार्डको संकेत गर्न सक्छ, वा उसले कसैलाई भन्नेछ जुन एकैचोटि आफ्नो हातमा लैजान सक्छ "आओ यहाँ! "जब खेलाडी खडा गर्ने निर्णय गर्दछ, उसले" स्ट्यान्ड "वा" अरू थप "गर्न सक्दैन, वा आफ्नो हातमा सार्नु, ताल्ल डाउन र टेबल माथि मात्र माथि यो इरादा संकेत गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि एक खेलाडीको पहिलो दुई कार्ड एउटै निरूपणको हो भने, जस्तै दुई जैक वा दुई छक्का, उनीहरूले उनीहरूको दुईवटा हातको रूपमा व्यवहार गर्न छनौट गर्न सक्छन् जब उनको पालो वरपर आउँछ। त्यसपछि उसको मौलिक शर्तको रकम कार्डको एकमा जान्छ, र एक समान रकम अर्को कार्डमा शर्तको रूपमा राखिएको हुनुपर्छ। खेलाडीले पहिले बायाँ हातले एक बायाँ हातमा राख्छ वा एक वा बढी पटक मारिरहेको हुन्छ; त्यसपछि त दाँया बजाउनुभएको छ। यस प्रकार दुई हातहरू अलग रूपमा व्यवहार गरिन्छ, र व्यापारीले प्रत्येकसँग आफ्नै गुणमा बस्छ। इइन्सको जोडीको साथ, खेलाडीले प्रत्येक इक्काको लागि एक कार्ड दिएको छ र पुन: नसोच्न सक्छ। साथै, यदि दस इ-कार्ड यी इक्हरू मध्ये एक को लागी गरिन्छ भने, भुक्तानी शर्तको बराबर छ (कुनै एक र एक अर्का, कुनै पनि समयमा ब्ल्याक ज्याकसँग)।
खेलाडीको लागि अर्को विकल्प खुला हुन्छ जब उनको दुई शर्तहरु लाई 9, 10, या 11 मा निभायो। जब प्लेयरको पछाडि आउछ, उसले मौलिक शर्तको बराबर एक शर्तलाई स्थान दिन्छ, र व्यापारीले तिनलाई मात्र एक कार्ड दिन्छ, जुन अनुहार राखिएको छ र हातको अन्तमा बसेको नभएसम्म अप्ट आउट छैन। दुई फाइवहरूसँग, प्लेयरले एक जोडा विभाजित गर्न सक्छ, डबल डाउन गर्नुहोस्, वा नियमित रूपमा नियमित रूपमा मात्र बजाउन सक्छ। ध्यान दिनुहोस् कि डीलरले विभाजन गर्ने विकल्प वा दुरुपयोग गर्ने विकल्प छैन।
जब डीलरको फेस अप अप कार्ड हो भने, कुनै पनि खेलाडीहरूले शर्तको आधारमा आधा शर्तको शर्त बनाउन सक्दछ कि डीलरको फेस-डाउन कार्ड दस कार्ड हो, र यसैले घरको लागि कालोपत्र। एकपटक सबै त्यस्ता पक्ष शर्तहरू राख्दा, डीलरले आफ्नो छेद कार्ड हेर्छ। यदि यो दस-कार्ड हो भने, यो माथि फर्काइएको छ, र ती खेलाडीहरूले बीमा शर्त जित्न सक्दछन् र उनीहरूको आधा-शर्तको रकम दोहोरो भुक्तान गरे - एक21 भुक्तानीमा। जब डाक्टरको लागि ब्लैकज्याक हुन्छ, निस्सन्देह, हात समाप्त हुन्छ, र खेलाडीको मुख्य शर्त एकत्रित हुन्छ - जबसम्म खेलाडीले ब्ल्याकज्याक गर्दैन, कुन अवस्थामा यो स्ट्यान्ड अफ छ। बीमा अविरसनीय रूपमा खेलाडीको लागि राम्रो प्रस्ताव छैन, जबसम्म उनी पूर्णतया निश्चित छन् कि असामान्य रूपमा उच्च संख्यामा दस-कार्डहरू अझै पनि बेवास्ता गर्न छोडेनन्।
एक पटक भुक्तान र एकत्रित कहिल्यै फिर्ता छैन। यसरी, व्यापारीलाई एक प्रमुख फाइदा भनेको हो कि खेलाडी पहिला जान्छ। यदि खेलाडी बस्ट जान्छ भने, उहाँ पहिले नै छ हराएको उनको दावेदार, भले पनि डीलर पनि बस्ट हुन्छ। यदि डीलरले 21 भित्र जान्छ भने, उसले प्रत्येक खेलाडीलाई भुक्तानी गर्छ जसले खेलाडीको शर्तको मात्रा खडा गरेको छ। यदि डीलरले 21 वा कममा उभिएको छ भने, उसले उच्च खेलाडी (उच्च 21 भन्दा बढी) रहेको शर्तको शर्त दिन्छ र कुनै पनि खेलाडीको शर्त निचला कुल मिलाउँछ। यदि स्ट्यान्ड अफ बन्द हुन्छ (खेलाडीलाई डीलरको रूपमा समान छ), कुनै चिप्सहरू भुक्तान गरिएका छन् वा सङ्कलन गरिएका छैनन्।
जब प्रत्येक खेलाडीको शर्त बसेको छ, व्यापारीले खेलाडीको कार्डमा बसाल्दछ र उनीहरूलाई स्पष्ट प्लास्टिक एल-आकारको ढालको छेउमा राखिन्छ। व्यापारीले जूताबाट निस्कन जारी राख्नुभन्दासम्म प्लास्टिक सम्मिलित कार्डमा आउँदैन, जुन यसले रिफ्लफल गर्न समय दिन्छ। एकपटक त्यो खेलको चिसो समाप्त भएपछि, डीलरले सबै कार्डहरू झल्काउँछ, कटौतीको लागि तिनीहरूलाई तयार पार्छ, जूतामा कार्डहरू राख्छ, र खेल जारी छ।
ब्ल्याक ज्याकमा टुट्ने रणनीतिहरू चाहिन्छ कि खेलाडीले प्रत्येक हात इष्टतम तरिकामा खेल्छन्, र यस्तो रणनीतिले सधैं ढिलो गर्छ कि डीलरको माथिल्लो कार्ड हो। जब डीलरको अपकार्ड राम्रो छ, एक 7, 8, 9, 10 कार्ड, वा इक्का उदाहरणको लागि, प्लेयरले 17 वा बढि नभएसम्म ड्राइंग रोक्न सक्दैन। जब डीलरको अपकार्ड खराब छ, 4, 5, वा 6, खेलाडीले 12 वा माथिको जितको रूपमा ड्राइभिङ रोक्न रोक्दछ। यदि बस्ट जाँदै गरेको कुनै मौका छ भने यहाँ रणनीतिले कार्ड लिने छैन। यस गरीब को पकडने वाला इच्छा डीलर को हिट गर्न को लागी छ र आशा छ कि 21 मा जाएँ। अन्तमा, जब डीलरको अप कार्ड एक उचित छ,2वा 3, प्लेयरले 13 वा माथिको साथ बन्द गर्नुपर्छ।
एक नरम हात संग, सामान्य रणनीति को मारने को लागी कम से कम 18 सम्म पुगन सम्म पुग्छ। यसैले, एस र एक छ (7 वा 17) सँग, प्लेयरले 17 मा रोक्न सक्दैन, तर हिट हुनेछ।
दबाइको लागि आधारभूत रणनीति निम्नानुसार छ: कुल 11 सँग, खेलाडीले सधैँ डबल गर्नु पर्छ। कुल 10 को साथ, उसले डिलिङ्ग नगरेसम्म डीलरले दस कार्ड वा अक्ष देखाउँछ। कुल9को साथ, यदि केवल डीलर को कार्ड निष्पक्ष वा खराब (2 मा6को माध्यम ले) हो त केवल दोहोरो चाहिए।
विभाजनको लागि, खेलाडीले सधैँ एक जोडीको एसिड वा 8 हरू विभाजन गर्नुपर्छ; त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहनु भएको छ।5हरूको एक जोडा पनि विभाजित हुन हुँदैन, किनकि कुल5को लागी राम्रो संख्या हो। सामान्यतः, 10s, 4s, वा 8 हरू विभाजित हुन सक्दछ जबसम्म डीलरले 2, 3, दस-कार्ड, वा इक्का छ। अन्तमा, 7s विभाजन नहुनु हुँदैन जब डीलर कार्ड खराब छैन (8 मार्फत 9)।
???? 11 फ्री कैसीनो स्पिन
???? EUR 580 नि: शुल्क कैसीनो टिकट
???? $ 4445 जम्मा रकम बोनस कोड छैन
💵 € 1820 कुनै जम्मा कैसीनो बोनस छैन
💵 यूरो 505 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 925% क्यासिनोमा मिलान
💵 यूरो 1650 कुनै जम्मा कैसीनो बोनस छैन
💵 $ 2695 कुनै जम्मा बोनस कैसीनो
💵 € 305 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 यूरो 2835 कुनै जम्मा बोनस छैन
💵 EURO 155 नि: शुल्क चिप
💵 € 470 अनलाइन कैसीनो टूर्नामेंट
💵 EURO 66 टूर्नामेंट
💵 $ 515 नि: शुल्क चिप कैसीनो
💵 200% जम्मा मिलान बोनस
💵 $ 970 NO DEPOSIT BONUS CASINO
💵 540% कैसीनोमा मिलान
💵 यूरो 520 मुक्त चिप
💵 $ 230 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 € 3070 NO DEPOSIT BONUS CASINO
💵 820% साइन अप क्यासिनो बोनस
💵 30% कैसीनोमा मिलान
💵 £ 2505 जम्मा रकम छैन
💵 € 3085 NO DEPOSIT BONUS
💵 $ 580 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 Eur 1840 NO DEPOSIT BONUS CASINO
💵 € 700 नि: शुल्क पैसा
💵 EUR 580 नि: शुल्क कैसीनो टिकट
💵 $ 3805 जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 पाउन्ड 145 नि: शुल्क नगद
💵 £ 515 जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 240% उत्तम साइनअप बोनस कैसीनो
💵 $ 60 अनलाइन क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 240% क्यासिनो म्याच बोनस
💵 € 3310 जम्मा जमा बोनस
💵 $ 225 नि: शुल्क चिप
💵 $ 750 क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 $ 3010 NO DEPOSIT
💵 यूरो 450 मुक्त कैसीनो चिप
💵 $ 690 नि: शुल्क चिप क्यासिनो
💵 € 65 फ्री कैसीनो टिकट
💵 यूरो 1095 कुनै प्रस्थान बोनस
💵 EUR 310 नि: शुल्क कैश
💵 470% उत्तम साइनअप बोनस कैसीनो
💵 € 222 फ्री चिप
💵 € 835 कैसीनो टूर्नामेंट freeroll
💵 पाउन्ड 170 कैसीनो टूर्नामेंट freeroll
💵 $ 1730 जम्मा कैसीनो बोनस छैन
💵 यूरो 1520 जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 EURO 55 नि: शुल्क नगद
💵 265 फ्री स्पिन कुनै जम्मा कैसीनो छैन
💵 € 685 कैसीनो टूर्नामेंट freeroll
💵 425% स्वागत बोनस
💵 $ 675 NO DEPOSIT BONUS CODE
बिग ब्लक्स एक तेज-पछाडि तर सरल खेल ठूलो जीतमा केन्द्रित छ। खेलले 243 तरिकाहरू जित्न र ...
तर, तपाई दुबैलाई देख्न सक्नुहुन्न: ती वास्तवमा Yggdrasil बाट यो सफ्ट-नामित स्लट खेलमा रिल्समा जुम्दा प्रतीकहरू छन् ...
अमेरिकन कालीजैक अपडेट गरिएको: जनवरी 18, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 अमेरिकन कालीजैक
2 🎁 सबै क्यासिनो बोनस:
3.0.0.0.1 ठूलो गफिन
3.0.0.0.2 स्पेस युद्धहरू
3.0.0.0.3 बिग ब्लोक्स
3.0.0.0.5 भेनिस गुलाब
3.0.0.0.6 घटना क्षितिज
3.0.0.0.7 क्रिसमस कारोल
3.0.0.0.8 नियन स्टेक्सक्स
3.0.0.0.9 ब्लैकज्याक प्लेयरहरू छनोट
3.0.0.0.10 वेरवोल्फ जंगली
3.0.0.0.11 असाधारण क्रियाकलाप
3.0.0.0.12 आयरिश आंखहरू
3.0.0.0.13 प्यास कारखाना
3.0.0.0.16 हट स्कूटर
3.0.0.0.17 राजाको 4
3.0.0.0.18 रक स्टार
3.0.0.0.19 रक्त शिकारी 2
3.0.0.0.21 जादुई स्ट्याकहरू
3.0.0.0.23 गुलाबी हात्ती
क्यासिनो बोनस > वेगासहाउस खेलहरू > अमेरिकन कालीजैक